PUNSAA oo Xukuumadda Madaxweyne Gaas usoo jeedisay in qiimayn lagu sameeyo hakadka ku yimi Mashruuca GIZ. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / PUNSAA oo Xukuumadda Madaxweyne Gaas usoo jeedisay in qiimayn lagu sameeyo hakadka ku yimi Mashruuca GIZ.
PUNSAA oo Xukuumadda Madaxweyne Gaas usoo jeedisay in qiimayn lagu sameeyo hakadka ku yimi Mashruuca GIZ.
Dalladda daneyayaasha aan dowliga ahayn ee Puntland (PUNSAA) ayaa war qoraal ah kasoo saarey fashilka ku yimid mashruucii midowga Yurub ku maalgalinayay Dayactirka lagu samayn lahaa wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Garowe.
Bulshada rayidka ah ee Puntland waxay dowladda Germany iyo hay,adaha kale ee bahwadaagta bahwadaagta kula ahaa mashruuca uga mahadcelisay doorka caawinaadda ee wadada Garowe-Galkacyo,waxayna ku boorisay doorka gacan siinta mashariicda lagu hormarinayo bulshada Puntland.
PUNSAA waxay xukuumadda Madaxweyne Gaas ku boorisay in loo xil saaro gudi qiimayn & dabagal kusameeya waxa keenay in uu mashruucu fashilmo,iyadoo isla markaana lala xisaabtamayo cidii iska lahayd masuuliyadda & xil gudasho la,aanta.